Itoobiya Oo Dil Ku Xumi Doonta Qofka Lagu Heli Tahriibin - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaItoobiya Oo Dil Ku Xumi Doonta Qofka Lagu Heli Tahriibin
Addis Ababa (JigjigaOnline) – Sharci qabya ah oo horyaalla golaha Baarlamaanka Itoobiya ayaa dhigaya qofkii lagu helo in uu dadka tahriibiyo uu muteysanayo xukun dil ah.
Sharciga oo uu diyaariyay xafiiska guud ee Xeer Ilaalinta Itoobiya ayaa ku saabsan ka hortagga iyo xakameynta tahriibinta dadka, ka ganacsiga dadka iyo in dibadaha si aan sharci ahayn dad loogu diro.
Dembiyada looga hortagayo sharciga ayaa badan, waxaana ugu horreeya tahriibinta oo xadhig ama dil lagu mutaysan karo.
Afhayeenka xafiiska xeer ilaaliyaha Itoobiya Zinabu Tunu wuxuu sheegay in sharcigan la diyaariyey uu yahay mid waafaqsan qaraarrada caalamiga ah ee ay Itoobiya aqbashay, haddana fal-dambiyeedka ka ganacsiga dadkana uu yahay dambi aad u weyn.
Dadka tahriiba oo badankoodu ay raadinayaan noolal iyo shaqo ka wanaagsan kuwa ay haystaan ayaa wajaha halis weyn, kuwo badanna waxayba ku dhinteen badaha.
Sida lagu xusay baaritaanno la sameeyay, xubnaha jirk qaar ka mid ah tahriibayaasha ayaa la iibsaday, qaar badanna iyaga oo aan gaarin hadafki ay lahaayeen ayey geeriyoodeen, kuwana waxay dhibaatooyin ka soo gaareen waxyeello maskaxeed iyo mid jireed oo noolashooda inta ka dhiman utun ku reebta.
Si gaar ah, dadka waddamada carabta u doonta shaqooyinka waxay kala kulmaan Kufsi, jirdil, ku tagrifalidda xooggooda iyo in mushaaraadka ay ku shaqeeyeen loo diido iwm, taasoo ay dad badan oo Itoobiya ka soo jeeda ay ku naf waayeen.
Mr Zinabu wuxuu intaasi raaciyey in markii ay bateen dhibaatooyinka ay tahriibka iyo ka ganacsiga dadka ay kala kulmaan muwaaddiniinta Itoobiya, ay dowladda ay ku qasbanaatay in ay qaado tallaabada adag “si ay dhibaatada shacabka haysata looga hortagayo”.
Maadaama ay dhibaatadu tahay mid taagan xal degdeg ahna u baahan, “si tallaabo ku haboon looga qaado dadka fal-dambiyeedyada noocan ah ka qayb qaata, in sharcigan la diyaariyey isla markaana shacabka dalka loo bandhigay si fikirkooda ay ugu biirinayaan”, ayuu yiri Zinabu.
Madaxweynaha Itoobiya Sahle-warqi Zawde oo dhawaan baarlamanka dalkaas la hadleysay waxay sheegtay in tani iyo inta uu xilka qabtay Ra’isul Wasaare Abiy Axmed, in muwaaddiniin dalka Itoobiya u dhalatay oo ay tiradooda kor u dhaafeyso 90,000 oo qof laga soo daayau xabsiyo kala duwan.
“Dowladda oo ku howlan dib u soo celinta muwaaddiniinta dibadaha ku silcaya iyo kuwa xabsiyada ku jira haddana waxaa loo baahan yahay in talaabbo kama dambeys ah laga qaado dullaaliinta iyo dadka dadka tahriibiyo,” ayuu yiri Mr Zinabu.
“Sharcigii horay uu baarlamaanka u soo saaray oo looga hortagayey tahriibinta dadka wuu dhaqan galay balse waxaa loo baahday in la adkeeyo ciqaaba cusub oo uu dilka ka mid yahay, maadaamaa dhibaatadu ay tahay mid aad u ballaaran”.